ဆရာတော်ကြီး ထုိုင်းနုိုင်ငံ ချူလာလောင်ကွန် တက္ကသုိုလ်မှပေးအပ်သော ဒေါက်တာဘွဲ့ကုို ထုိုင်းနုိုင်ငံ သံဃာ့ရာဇာဆရာတော်ထံမှ လက်ခံစဉ်။
ဆရာတော်ကြီး ထိုင်းနိုင်ငံ မဟာချူလာလောင်ကွန်း တက္ကသိုလ်က ပေးအပ်သော ဒေါက်တာဘွဲ့ကို လက်ခံယူနေစဉ်
ဆရာတော်ကြီးသည် ထိုင်းနိုင်ငံ မဟာချူလာလောင်ကွန်တက္ကသိုလ်က ပေးအပ်သော ဒေါက်တာဘွဲ့ကို ရယူခဲ့စဉ် အမှတ်တရဓာတ်ပုံကလေး။
Posted by ရနောင်းဌာနီ ဘ၀မြှင့်တင်ရေးကျောင်း at 6:59 AM No comments:
Posted by ရနောင်းဌာနီ ဘ၀မြှင့်တင်ရေးကျောင်း at 6:33 AM No comments:
ဆရာတော်ကြီး၏ ရနောင်းမြို့ ၀ပ်စီမိန်ကျောင်းဝုိုင်းအတွင် ကလေးငယ်များ ထောက်ပံ့ရေးအတွက် တရားတော်များကုို ကြွရောက်ချီးမြှင့်စဉ် ရနောင်းရောက် မြန်မာနုိုင်ငံသားများ လာရောက်တရားတော်နာကြစဉ်။
Posted by ရနောင်းဌာနီ ဘ၀မြှင့်တင်ရေးကျောင်း at 12:06 AM No comments:
Labels: ဆရာတော်၏ ခရီးစဉ်
တိပိဋကဆရာတော် ဦးဂန္ဓမာလာလင်္ကာရ ဆရာတော်သည် ထုိုင်းနုိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့မှတဆင့် ထုိုင်းနုိုင်ငံ တောင်ပုိုင်ရှိ ဟုိုက်ယုိုင်မြို့ လက်အိတ် စက်ရုံသုို့ ကြွရောက်ကာ ရနောင်းဌာနီကလေးငယ်များ ဘ၀အရည်အသွေးမြှင့်ရေးကျောင်းအတွက် ပညာရေးထောက်ပံ့လှူဒါန်းပွဲသုို့ ၁၀.၁၁.၂၀၁၂ နေ့ည နှင့် ၁၁.၁၁.၂၀၁၂ နေ့ညတုို့တွင် တရားတော်များကုို ဟောကြားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း တုိုက်တွန်းနှိုဆော်အပ်သည်။
Posted by ရနောင်းဌာနီ ဘ၀မြှင့်တင်ရေးကျောင်း at 11:37 PM No comments:
Posted by ရနောင်းဌာနီ ဘ၀မြှင့်တင်ရေးကျောင်း at 8:56 AM No comments:
ဆရာတော်ဦးဝါသေဋ္ဌ(အကျိုးဆောင်)ဆရာတော်ဦးကောသလ္လ(ရနောင်းဌာနီကျောင်းတာဝန်ခံဆရာတော်) တိပိဋကဆရာတော် ဦးဂန္ဓမာလာလင်္ကာရ(အလယ်ယပ်တောင်ကုိုင်ဆောင်ထားသောဆရာတော်) ဦးစိန္တိတ ထုိုင်းစကားပြန် ဆရာတော်ဦးပညာဝရ(အကျိုးဆောင်ဆရာတော်)
Posted by ရနောင်းဌာနီ ဘ၀မြှင့်တင်ရေးကျောင်း at 8:07 AM No comments:
ထုိုင်းနုိုင်ငံ ရနောင်းမြို့ရှိ ရနောင်းဌာနီကျောင်း၏ ထောက်ပံ့ရေး အဖွဲ့သားများအား လက်လှမ်းမီသလောက် ပေးအပ်ထားသော ထာဝရလှူဒါန်းနုိုင်သည့် ကောင်းမှုများ စာရင်း ဗီနုိုင်းပုံစံဖြစ်ပါသည်။
Posted by ရနောင်းဌာနီ ဘ၀မြှင့်တင်ရေးကျောင်း at 7:42 AM No comments:
`ရုိုးသားစွာဝန်ခံပါရစေ ဘလော့တွင်ဖော်ပြထားသော အချို့သောဆောင်းပါး ကဗျာများတုို့ သည် တစ်ခြားသော ဘလော့မှကူးယူဖော်ပြထားပါသည် သုို့သော်လည်း မိမိ၏ ပေါ့လျှော့မှုကြောင့် ဆုိုက်နာမည်များကုို မဖော်ပြမိလျှင် ခွင့်လွတ်ပေးပါရန် တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
ထိုင်းနှင့်မြန်မာ၊ချစ်ကြည်စွာဖြင့် ဆရာတော်များ၊စိတ်တူထားလျက် ဒို့များရင်သွေး၊ပညာရေးနှင့် ချင့်တွေးလိမ္မာ၊မြတ်ဘာသာကို ခိုင်မာယုံကြည်၊လူ့စွမ်းရည်တို့ မြင့်စည်ထွန်းပြောင်၊မျိုးဂုဏ်ဆောင်ဖို့ ၀န်ဆောင်ကျွေးမွေး၊ပညာပေး၍ ဘ၀နောင်ရေးသာပေမည်။ ? ?
နေမင်းလမင်းလောက် လောကကြီးကို အလင်းရောင် မပေးနိုင်ပေမဲ့ မိမိတို့မှာရှိတဲ့အလင်းရောင်ကလေးနဲ့ တတ်နိုင်သမျှ ကလေးငယ်များကို အလင်းရောင်များ ပေးခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
www.myanmarkid.com ဆိုက်ကိုအသုံး မပြုတော့ပါ။ www.ranonghtarnischool.blogspot.com/ကိုသာ အသုံးပြုပါသည်။ Account No : 806-0-25706-4 ဘဏ်အကောင့်ကို အသုံးမပြုတော့ပါ။ Account No: 232-2-33230-3 ဘဏ်အကောင့်သာလျှင် အသုံးပြုပါသည်။
မအေးဇာလီ - ၈၂၃၈၈၀၄၂ လင်းစိန်မြ - ၉၂၃၇၉၇၂၃ ကိုကျော်ဝင်း - ၉၇၆၁၂၇၄၇ ကိုဇင်အောင် - ၉၄၅၇၄၅၃၁ 245-93111-5 POSB SAVING
ဦးကောသလ္လ အကျိုးတော်ဆောင်ဆရာတော် ဖုန်းနံပါတ်-၀၈၇၅၄၇၇၃၈၉၊ ranong198@gmail.com
ဆရာတော်၏ ခရီးစဉ် (4)
မြတ်စွာဘုရား ဂုဏ်တော်(၉)ပါး ပါဠိ+မြန်မာပြန်နှင့် ဂုဏ်တော်ပွားရကျိုး
မျက်စိရေတိမ် ရောဂါ (Glaucoma)
What do we live for if not to make life less difficult for each other? အသက်ရှင်နေထိုင်မှု အခက်အခဲ လျှော့နည်းအောင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မကူညီနိုင်လျှင် ကျွှန်ုပ်တို့အဘယ်အတွက် အသက်ရှင်နေကြသနည်း။
counter hit, eu casino, Caribbeangoldcasino, fx, Casino
Copyright © ရနောင်းဌာနီကျောင်း | Powered by Blogger